प्राचीन सभ्यताहरू, धर्म, समाज र संस्कृतिहरूकाे महान भूमि भारतवर्ष आफैँमा रहस्य र रोमाञ्चका लागि चिनिन्छ। एकातिर जहाँ यस पवित्र भूमिमा दुनियाँकाे प्रथम भाषा संस्कृतकाे जन्म भयाे भने अर्कातिर यसै भूमिमा संसारकाे प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेदकाे रचना भयाे। फेरि यहाँ नै एकातिर दुनियाँकाे प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपिकाे अाविर्भाव भयाे भने अर्कातिर यहाँ नै दुनियाँकाे प्रथम विश्वविद्यालय नालन्दा र तक्षशिलाकाे स्थापना भयाे।
एक कल्पकाे आयु :कल्पवृक्षकाे अर्थ हुन्छ, जुन एक कल्पसम्म जीवित हाेस्। तर अब सवाल के उठ्छ भने के साँच्चै यस्ताे कुनै वृक्ष थियाे वा छ त ? यदि थियाे भने आज पनि त्याे हुनुपर्ने किनभने त्याे त एक कल्पसम्म जीवित रहने वृक्ष हाे। यदि यस्ता कुनै वृक्ष छ भने त्याे कस्ताे हुन्छ ? र यसका के फाइदाहरू छन् ? यद्यपि केही मानिसहरू के मान्छन् भने अपरिजातकाे वृक्षलार्इ नै कल्पवृक्ष मानिन्छ, तर अधिकतर याे तथ्यसँग सहमत छैनन्।
साभार पुर्बेलीन्युज / वेबदुनियाबाट नेपालीमा अनुवाद भाषा अनुवादकः कुमार पाैडेल